Dhibaatooyinka FSX & P3D ee Belfast
Su'aal Dhibaatooyinka FSX & P3D ee Belfast
1 sano 3 bilood ka hor #837 by Dariussssss
Gaaban, AP ma si buuxda u shaqaynayso. Xajmiga, madax-xajinta iyo xawaare-qabadka ayaa ah mid caadi ah, laakiin ma ahan raacitaanka wadada GPS. Wax walba oo kale waxay u muuqdaan kuwo fiican, diyaarad fiican.
1 sano 3 bilood ka hor #838 by Gh0stRider203
ma waxaad gelisay qaab GPS? LOL Idk waxa furaha aad ka heshay habkaas haddii aysan jirin wax is beddel ah, laakiin Mine, waa Ctrl Shift N
1 sano 3 bilood ka hor #839 by Dariussssss
Hey Gh0st, waa maxay kor?
Dhamaan wax walba oo sax ah. On AP ah iskiis, waa isbedel, sidaas, si dhib leh ka fududaan karaa taas.
1 sano 3 bilood ka hor #840 by Gh0stRider203
fiican, ka dibna dab damiskaaga farsameeyo
1 sano 3 bilood ka hor #841 by Dariussssss
Haha .... aad u roon.
Lol..yeah, taasi waxay ahayd mid aad u sarreeysa markii uu kudhawaaqay AP.
1 1 sano ka hor bisha #938 by DRCW
Fiiri feylka CFG ee qaybta autopilot, haddii aadan helin mushkilad halkaa, iskuday inaad gashid mid kale oo gawaarida gawaarida ah CFG, ama ku dar shidaalka Nav / GPS oo ka socda diyaarad kale sida 2D oo aad ku darto galka panelka
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.218